फेरी के भयो बिक्रमलाइ? भन्छन्, ‘यस्तो जिन्दगि जिउनु भन्दा म’र्नु बेस’ (भिडियो)::Point Nepal
फेरी के भयो बिक्रमलाइ? भन्छन्, ‘यस्तो जिन्दगि जिउनु भन्दा म’र्नु बेस’ (भिडियो)
काठमाडौं । रुपा र कृष्णको जस्तै अर्को जोडी अहिले सामाजिक सञ्जालमा फेरी भाइरल भएका छन् । केही वर्ष देखि पोखरामा बसेर दोहोरी साँझमा काम गर्ने विक्रम सुनार कामबाट फर्कदा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे । उनी मध्यरातमा दुर्घटनामा परेका थिए । काठमाडौं न्युरो अस्पतालमा उपचार गर्दा ६ महिना सम्म उनको आवाज नै आएन । तर विस्तारै आवाज आउन थाल्यो । तर पहिलाको जस्तो आवाज अहिले पनि छैन ।
उनी आफ्नो बुवाआमाको बुढेसकालमा सहारा बन्न चाहन्थे तर अहिले पानी पनि अरुले नै खुवाउनुपर्छ । उलाई आफ्नो आमाले हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो । त्यो बेलामा उनले आमालाई धेरै पटक वि’ष ल्याएर दिनु म बाँच्न चाहन्न भनेर भने । त्यसो भन्दा आमा रुनुहुन्थ्यो । त्यही बेलामा उनको एक जना युवतीसंग फेसवुकमा कुराकानी हुन्थ्यो । मनु लामासंग उनको फेसवुकमा कुराकानी हुन थाल्यो । फेसवुकमा कुराकानी हुँदै उनीहरुबीच टेलिफोनमा कुराकानी गर्न थाले